news The Global New Light of Myanmar, 03 Jun 2019 (3 years ago )
မြန်မာလုပ်သားများအား ဂျပန်မှ စက်ပြင်ကျွမ်းကျင်သင်တန်းများ ပေးမည်
မြန်မာ-ဂျပန် SEDA ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိစက်ပြင်သမားများသည် အလုပ်သင်များအဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ “ဂျပန်နိုင်ငံက သက်ကြီးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာတွေမှာ လုပ်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကဝန်ဆောင်မှုလုပ်သားတွေ ပို့ပေးတာနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်က MoU လက်မှတ်ရေးထိ...
Under the supervision of Myanmar-Japan SEDA, mechanics from Myanmar will be receiving internships in Japan. “We signedaMoU concerning sending Myanmar service workers to work at the care centers for the aged in Japan three months ago. Now, mechanics will be sent to Japan as soon as possible. We ...
Ministry to take Loan of 100 m USD for Pregnant Mothers and Children Cash Assistance
news Eleven Myanmar, 01 Jun 2019 (3 years ago )
A proposal to takealoan of 100 million US dollars for the cash assistance program for pregnancy mothers and the children aged two, was submitted by the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, at the 12th regular session of the Union Parliament on May 31. The Ministry of Social Welf...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ၄င်းတို့မှ မွေးဖွားလာသော၂နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအတွက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးရန် ကမ္ဘာ့ ဘဏ်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(IDA)ထံမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း (၁၀၀) ချေးယူရေးကိစ္စကို ဇွန်လ ရ ရက်က ကျင်း ပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်း အဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို လူဦးရ...
ကိတိာ်ကဟံးန့ၢ်စ့ဒုးလိၢ် ၁၀၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် လၢတၢ်ကဟ့ၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢမိၢ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး ဒီးဖိအ ဂီၢ်
တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢ တၢ်ကလိၢ်န့ၢ်စ့ ၁၀၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃး တၢ်ကဟ့ၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢမိၢ်လၢ အိၣ်ဒီးဟုးသး ဒီး ဖိခံနံၣ်ဆူဖီလာ်အဂီၢ်, ဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်ခီဖျိ ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤကိတိာ်, ဖဲကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ် ဒိၣ်ညီနုၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁၂ ဘျီတဘျီ, ဖဲလါမ့ၤ ၃၁ သီန့ၣ်လီၤ. ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဆီၣ်ထွ...
Cotton, Textile, Weaving Courses to be offered in Hpa-An Town
news The Global New Light of Myanmar, 30 May 2019 (3 years ago )
The Weaving and Vocational Training School in Hpa-an Township, Kayin State, will offerayear-long course on cotton and textiles andasix-month course on weaving. The cotton and textile course has 20 seats, while the weaving course has 10 seats. The school will giveastipend of K30, 000 per mon...
ဝါဂွမ်း၊ ချည်မျှင်၊ရက်ကန်းယက်တန်းများ ဘားအံတွင် ပို့ချမည်
ဘားအံရှိ ရက်ကန်းယက််ခြင်းနှင့် အသက်မွေးမှုသင်တန်းကျောင်းတွင် ဝါဂွမ်းနှင့် ချည်မျှင်သင်တန်းကို တစ်နှစ်ပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရက်ကန်းယက်လုပ်ခြင်းသင်တန်းကို ၆ လ ပို့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝါဂွမ်းနှင့် ချည်မျှင်သင်တန်းတွင် အယောက် ၂၀ ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ရက်ကန်းယက်သင်တန်းတွင် ၁၀ ယောက် ခေါ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ကျော...
YRIC မှ အလုပ်အကိုင် ၅၆၀၀ ကျော် ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပစီမံကိန်း ၁၁ ခုကို ခွင့်ပြု
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်(YRIC) သည် ပြည်ပစီမံကိန်း ၈ ခုနှင့် ပြည်တွင်း စီမံကိန်း ၃ ခုကို မီးစိမ်းပြလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုစုပေါင်း ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၁၅.၈ သန်းနှင့် ငွေကျပ် ၆.၂ ဘီလီယံရှိကြောင်း ယမန်နေ့က အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ (YRIC) ၏ သတင်းစာရှ...
ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် ပျဲတၢ်ပျဲလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ၁၁ ခါ, ဒ်သိးကဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၅,၆၀၀ ခါအဂီၢ်
ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢထံဂုၤ ကီၢ်ဂၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဃိးခါ, ဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢ ခါ, တၢ်တယာ် ဝဲစ့မိၢ်ပှၢ်လီၤလၢ ၁၅.၈ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် ဒီး ၆.၂ ဘ့လယၢၢ်စ့ပယီၤကၠး စုာ်စုာ်, ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤ အီၤမဟါ တနံၤလီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၅...